Aqriso: ONLF oo war cusub ka soo saartay xiisadaha weli ka taagan Ismaamulka Soomaalida Ethiopia | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Aqriso: ONLF oo war cusub ka soo saartay xiisadaha weli ka taagan...
Aqriso: ONLF oo war cusub ka soo saartay xiisadaha weli ka taagan Ismaamulka Soomaalida Ethiopia
War ka soo baxay Jabhadda ONLF ayaa waxaa looga hadlay isbedalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia, gaar ahaan colaado ka soo cusboonaaday halkaasi.
ONLF ayaa baaq nabadeed u dirtay Beelo ku dagaamaya deegaano iyo degmooyin hoostaga ismaamulka Soomaalida Ethiopa.
Halkan hoose ka aqriso War-Saxaafadseedka.
Tan iyo markii ay isbedallada siyaasadeed ka dheceen dalka ee la soo afjaray caburintii iyo cadaadiskii lagu haayay bulshada Soomaalida Ogaadeenya, waxaa soo kordhayay colaadaha iyo isku dhecyada beelaha dhexdooda ah, kuwaasoo dhibaatooyin badan gaarsiiyay dadwaynaha, islamarkaana carqalad ku noqday taabba-gelinta nabadda iyo horumarinta deegaanka.
Waxaa jira dagaallo badan oo dhex-maray beelaha Soomaalida Ogaadeeniya oo gaystay waxyeellooyin dhimasho iyo dhaawacba isugu jira, kuwaasoo ka dhashay dhulal la isku haysto. Waxaa sidoo kale jira meelo badan oo la is hor-fadhiyo, lagana cabsi qabo inay dagaallo ka billowdaan, oo u baahan in laga qaado tallaabooyin lagu baajinayo dhiig macnadarro ah ku daata.
Colaadaha beelaha dhexdooda ah waxaa sabab u ah tuulooyin ama dhul deegaan ah oo la isku haysto, waxaana intooda badan raad ku leh siyaasadii taliskii hore ee ahayd abuurista tuulooyin ka turjumaya danaha amni ee taliska ee aan ka turjumaynin danaha bulshada deegaannadaas deggan.
Arrintaasina waxay halis galisay amnigii dalka iyo xiriirkii wanaagsanaa ee u dhexeeyay beelaha wada-dega ama deriska ah. Waxay sidoo kale khatar ku tahay daryeelka dhulka daaqsinta ah cimilada guud.
Sidaas darteed, waxay Jabhaddu ugu baaqaysaa bulshada Soomaalida Ogaadeeniya inay si degdeg ah u joojiyaan isku-dhacyada dhexdooda ah, isla markaana ay wada-xaajood iyo is af-garad ku dhammeeyaan xurgufaha u dhexeeya.
Jabhaddu waxay sidoo kale dowlad deegaanka ugu baaqaysaa inay la timaado barnaamij wax ku-ool ah oo lagaga hortegayo isku-dhacyada soo noq noqonaya ee beelaha u dhexeeya, islamarkaana ay diyaariso qorshayaal cad-cad oo lagu xakamaynayo isku-dhacyadaas iyo hay’adihii qorshayaashaas fulin lahaa.
Jabhaddu waxay dhinaceeda diyaar u tahay inay dowlad deegaanka kala shaqayso sidii xal waara loogu heli lahaa colaadaha beelaha ee maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya. Jabhaddu waxay aaminsan tahay in xaqiijinta midnimada shacabka iyo dib u-heshiisiinta bulshadu ay fure u yihiin xaqiijinta amniga dalka.
Jabhaddu waxay si cad uga soo horjeeddaa tuulooyinka aan nacfiga u lahayn bulshada ee qaabka siyaasadaysan loo abuurayo, kuwaasoo danta laga leeyahay ay tahay is riix-riixiyo in Qabandi lagu helo.
Waxaa kaloo lagama maarmaan ah in la hirgeliyo barnaamijyo wacyigalin ah oo dadwaynaha lagu barayosarrayo sharciga iyo in kala-dambayntu ay fure u tahaynabadda iyo horumarka deegaanka ayaa lagu soo geba-gabeeyay warka ka soo baxay ONLF.